Jon Bernthal ၏အပြစ်ပေးသူသည် Walking Dead's Shane နှင့်မည်သို့နှိုင်းယှဉ်သည် - Netflix မူရင်း
Marvel ရဲ့ Daredevil ရာသီ 2: Jon Bernthal ရဲ့အဆိုပါအပြစ်ပေး The Walking Dead ရဲ့ Shane နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပုံ
အကြွေး: Daredevil - Netflix
Daredevil ရာသီ ၂။ ပြစ်ဒဏ်ကျသူထောင်ထဲမြင်ကွင်း (ဗီဒီယို) flပြီလ 2016 ခုနှစ်တွင် Netflix ကအပေါ်အသစ်ကဘာလဲ
Jon Bernthal ၏လူကြိုက်အများဆုံးအခန်းကဏ္, ဖြစ်သော Marvel's Daredevil မှပြစ်ဒဏ်နှင့် The Walking Dead မှ Shane တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။
သငျသညျမမွငျပါလျှင်ရှေ့ဆက်ဖြစ်နိုင်သောလုယူသောသူ Daredevil ရာသီ2သို့မဟုတ်၏ပထမနှစ်ရာသီ လမ်းလျှောက်နေသောအသေကောင်များ!
Jon Bernthal သည် Punisher ဦး ခေါင်းခွံကိုသူ၏ရင်ဘတ်တွင်မခြယ်ခင် အံ့’s ခြင်းရဲ့ Daredevil ရာသီ 2, Bernthal မှ Shane အဖြစ်သူ၏အခန်းကဏ္forကိုလူသိများခဲ့သည် လမ်းလျှောက်နေသောအသေကောင်များ။
အချို့သူများအတွက် Bernthal သည် Shane မှဖြစ်သည် လမ်းလျှောက်နေသောအသေကောင်များ, ငါလောင်းကစားခဲ့လျှင်, ငါသညျအထူးသဖြင့် Marvel ပရိသတ်တွေနဲ့အတူပြောင်းလဲသွားတော့မည်ဟုပြောလိမ့်မယ်။
ဇာတ်ကောင်နှစ် ဦး အကြားတူညီသည် လမ်းလျှောက်နေသောအသေကောင်များ နှင့်ပြစ်ဒဏ်မှ Marvel ရဲ့ Daredevil, သိသာဖြစ်ကြသည်။ ဇာတ်ကောင်တွေပတ်ပတ်လည်မှာကမ္ဘာကြီးပြိုလဲသွားပြီ။ ရှိန်အတွက်, ကပိုပကတိပါပဲ။ ဖရန့်ရဲတိုက်အတွက်၎င်းသည်သူ၏မိသားစုသေဆုံးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြိုလဲခြင်းဖြစ်သည်။
ဇာတ်ကောင်တစ် ဦး ချင်းစီ၏အဓိကကွာခြားချက်မှာမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိလက္ခဏာများ မှလွဲ၍ ပထမရာသီနှစ်ခုအတွင်းရှိ Shane သည်အနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိပုံရသည်။ လမ်းလျှောက်နေသောအသေကောင်များ။ သူ Rick ထွက်သွားသည်တစ်ချိန်ကသူ Lori နှင့်အတူရနိုင်အောင်မျှော်လင့်ပါတယ်။ အပြစ်ပေးသူနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ဘာလုပ်မည်ကိုပြောပါ၊ Frank Castle မှာကိုယ်ကျင့်တရားသံလိုက်အိမ်မြှောင်လည်းရှိတယ်၊ Shane မှာသူအရင်ကမရှိဖူးဘူး။
ပိုများသော netflix:သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Netflix စီးရီးအတွက်သရုပ်ဆောင်ဖို့အကောင်းဆုံး Marvel ဇာတ်ကောင် 10
အမျိုးသားနှစ် ဦး စလုံးသည်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သူများဖြစ်သော်လည်းအပြစ်ပေးသူသည်မိမိ၏မိသားစုကိုသတ်ရန်တာဝန်ရှိသူများကိုသတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးခဲ့သည်။ သူကဖြစ်နိုင်သမျှအများဆုံးရက်စက်သောလမ်းအတွက်အကြောင်းတတ်ပေမယ့်တစ်လမ်းအတွက်, မြင့်မြတ်သောအကြောင်းမရှိပါပဲ။
Netflix သည် 2021 ၏အကြီးမားဆုံး Netflix မူရင်းတစ်ခုမှဖျက်သိမ်းလိုက်သည်
သိသာထင်ရှားတဲ့ Punisher ပင် Shane ထက်ဘဝနှင့်လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းများမှပင်ထပ်မံဖယ်ရှားခံရပြီး၎င်းသည်ပုံစံဖြင့်ဖြစ်သည်။ ငါနောက်ကွယ်ကဖန်တီးမှုအသင်းနှင့်တူခံစားရတယ် Daredevil Bernthal ရှိန်အဖြစ်ကိုမြင်တော်မူ၏ လမ်းလျှောက်နေသောအသေကောင်များ သူသည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော၊ မှောင်မိုက်သော၊ ပိုမိုဒေါသကြီးစွာဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးယုံကြည်နိုင်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုသဘောပေါက်ခဲ့သည်။ Shane သည်မှောင်မိုက်သောအရပ်သို့ရောက်သော်လည်းဒုတိယရာသီတွင် Shane သည်အပြစ်ပေးသူနှင့်တွေ့သည့်နေရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့်မှောင်မိုက်သောအရပ်သို့သွားသည်မဟုတ်ပါ Daredevil ။
အဖြစ်ဝေးငါသိသကဲ့သို့, အဘယ်သူမျှမ Daredevil အဖွဲ့သည်သူတို့ Bernthal ရဲ့အလုပ်ကိုအသုံးပြုကပြောပါတယ် လမ်းလျှောက်နေသောအသေကောင်များ သူ့ကိုဖရန့် Castle အဖြစ်သွန်းလောင်းရန်။ ဤအသွန်းအသင်းများကိုတစ်ခုချင်းစီကိုအခန်းကဏ္ for များအတွက်လုပ်သလောက်သုတေသနနှင့်အတူငါ Bernthal ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်သေချာပါတယ် လမ်းလျှောက်နေသောအသေကောင်များ သူ့ကိုအခန်းကဏ္downကိုဆင်းသော့ခတ်ကူညီပေးခဲ့သည်။
သရုပ်ဆောင်အများစုသည် Bernthal ပြုလုပ်ခဲ့သော Punisher ၏အခန်းကဏ္ for နှင့်သူပရိသတ်ကိုယုံကြည်စေရန်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်နေရာသို့မရောက်ရှိနိုင်ပါ။ အဲဒီမှာမကြာသေးခင်ကသမိုင်းမှာအပြစ်ပေးသူလေးယောက်ရှိခဲ့ပြီး Bernthal ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။
၏ဒုတိယရာသီကိုကြည့်ပြီးနောက် Daredevil Bernthal ၏အပြစ်ပေးသူ၏မော်ကွန်းသဘောသဘာဝကိုမြင်လျှင်ကျွန်ုပ်ထံမှ Shane အကြောင်းစဉ်းစားရန်အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည် လမ်းလျှောက်နေသောအသေကောင်များ ထပ်ခါထပ်ခါ ဒီ dude အပြစ်ပေးဖြစ်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့သူဟာအမြဲအပြစ်ပေးသူဖြစ်လိမ့်မယ်၊ အနည်းဆုံးတီဗီရှိုးနဲ့ရုပ်ရှင်အနည်းငယ်မှာသူဒီဇာတ်ကောင်ကိုကစားဖို့ထိုက်တန်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါကမျှတပုံရသည်!
ဆယ်ကျော်သက် mom,2ရက်နေ့မှာအာဒံ
ပိုကောင်းတယ် netflix အပေါ် saul ရာသီခေါ်ပါ
အံ့ ulous ဘွယ်သော ladybug netflix လွှတ်ပေးသည့်နေ့
ဟာဝိုင်ယီကျွန်းငါးရာသီ၏ ၆ ရာသီသည် netflix ပေါ်လာသည်